Akụkọ - iko kpụ ọkụ n'ọnụ, uru na ọghọm ya, unu niile maara?
Iko dị ọkụ, uru na ọghọm ya, unu niile maara?
Iko dị ọkụ bụ ụdị iko nchekwa. N'ezie, ọ bụkwa ụdị iko a na -akwanyere ùgwù. Iji nwekwuo ike nke iko, a na -ejikarị ụzọ kemịkal ma ọ bụ nke anụ ahụ eme ihe nrụgide compressive n'elu iko ahụ. Mgbe a na -etinye iko ahụ n'ike mpụga, a na -ebu ụzọ kwụsị nrụgide elu, si otú a na -emeziwanye ikike iburu ya na ịkwalite nguzogide ikuku nke iko ahụ n'onwe ya. Mmekọahụ, oyi na -ekpo ọkụ, ujo na ihe ndị ọzọ.
Iko na-ewe iwe bụ ụzọ a na-esi eme ka iko na-ese n'elu mmiri dị ọkụ n'akụkụ ebe na-eme ka ọ dị nro, a na-ajụkwa ihu iko ngwa ngwa, nke mere na a na-ekesa nrụgide mkpakọ n'elu enyo, na nrụgide tensile dị na etiti etiti. N'ihi nrụgide nrụrụ nha nha siri ike, nrụgide nrụgide na -esite na mpụga na -ewepu site na nrụgide nrụgide siri ike nke iko ahụ, si otú a na -abawanye nchekwa nke iko ahụ.
Iko dị ọkụ nwere njirimara ndị a:
1. Ike: The n'ibu ike, mmetụta na-eguzogide na ekwe ekwe nke iko mgbe tempering nwere ike iru 4-5 ugboro na nke nkịtị iko.
2. a na -eme ka nkwụsi ike ka mma: iko nwere ike ịnagide nnukwu ọdịiche okpomọkụ na -enweghị mmebi, na iguzogide ihe dị iche na -agbanwe agbanwe bụ okpukpu atọ nke iko na -ese n'elu mmiri nke otu ọkpụrụkpụ. Nwere ike iguzogide mgbanwe okpomọkụ nke 150 C, nwere mmetụta dị ukwuu na igbochi mgbawa ọkụ.
3. Nchekwa ka mma: Mgbe iko mebiri emebi mebiri, ọ ga-egosi ngwa ngwa obere akụkụ ihu, wee si otú a na-abawanye nchekwa nkeonwe. Ngwa: Ngwongwo ụlọ, elektrọnik na ụlọ ọrụ eletriki, ihe owuwu, ụlọ ọrụ ịchọ mma, ime ụlọ ịsa ahụ, ụgbọ ala, ihe mgbapụ na ebe ndị ọzọ dị mkpa maka nchekwa na ọnọdụ okpomọkụ, enwere ike iji ya mee ihe dị ka ihe nkiri mbụ nke iko mkpuchi na iko mkpuchi.
Na -eji: Efere dị larịị na iko a kpọnwụrụ akpọnwụ bụ nke iko nchekwa. A na-ejikarị ya eme ihe na ọnụ ụzọ ụlọ elu na windo, mgbidi ákwà mgbochi iko, iko nkewa ime ụlọ, ụlọ ọkụ, ohere nlegharị anya nlegharị anya, arịa ụlọ, ihe mkpuchi iko na ihe ndị ọzọ.
Ọdịmma na adịghị ike nke iko kpụ ọkụ n'ọnụ:
1. Mgbe enweghị ike ịkpụ na ịhazi iko ahụ jụrụ oyi, a ga -ahazi iko ahụ ka ọ dị nha na ọdịdị chọrọ tupu iwe ewe iwe, wee kpasuo iwe.
2. Ọ bụ ezie na ike iko na-ajụ oyi siri ike karịa nke iko nkịtị, iko a na-ajụ oyi nwere ike ịgbapụ onwe ya (mgbawa nke onwe) mgbe ọdịiche nke ọnọdụ okpomọkụ gbanwere nke ukwuu, na iko nkịtị anaghị enwe ike ịgbawa onwe ya.
Mgbe iwe kpuchiri iko, ike igwe dị n'elu iko ahụ dị ugboro 3 ruo 5 karịa nke iko nkịtị, mana akụkụ nke iko a na -emegharị ahụ adịchaghị nhịahụ, ọ nwere ike mebie mgbe ọ gbasịrị ndị agha mpụga. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'èzí na-agbanwe ugboro ugboro, iko nwere oke oyi nwekwara ike ịgbawa onwe ya.
Mpempe akwụkwọ ozi ochie nke ọnụ ụzọ na windo na -echetara onye ọ bụla na mgbe ị na -eji ngwaahịa iko dị nro, kpachara anya ka ị ghara ịkpụ akụkụ. A na-atụ aro ka ị ghara ime ka okpomoku iko gbanwee nke ukwuu n'ime obere oge iji zere mgbawa onwe onye. Na mgbakwunye, akụkụ etiti nke iko a na -ajụ oyi bụ nke kachasị ike, nkuku anọ ya na akụkụ ya bụ nke na -esighi ike.
Ọ bụrụ na enwere ihe mberede, iko nwere ike ịgbaji wee gbapụ. Ụzọ kacha mma bụ iji nkịka nchekwa ma ọ bụ akpụ akpụ ọzọ kụọ ihu na akụkụ nke iko ahụ, ọkachasị n'etiti etiti elu iko ahụ. Ozugbo iko ahụ gbawara, ọ na -adị mfe ịkụpịa iko ahụ dum.